सामुहिक लगानी कोषमा किन लगानी गर्ने ? - Arthasansar
विहीबार, १५ असोज २०७७, १० : ३४ मा प्रकाशित
आफूसँग भएको स–सानो बचतलाई लगानीकर्ता स्वयम् आफूले धितोपत्र बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा संग्लन भएर धितोपत्रको कारोबार गर्ने अथाव कुनै मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट लगानी गर्दा लगानीकर्तासँग २ वटा विकल्प हुन्छन् ।
यदि कुनैपनि लगानीकर्ताले पहिलो पटक बजारमा प्रवेश गर्दै छन् भने लगानीकर्ताले कुनकम्पनीमा लगानी गर्ने ? कतीलगानी गर्ने? कसरी लगानी गर्ने, कति जोखिम हुन्छ, कसको माध्यमबाट गर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न चुनौतिहरु खडा हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले आफुसँग भएको मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । नेपालमा साना लगानीकर्ताहरु फण्डलाई परिचालन गर्न अथवा लगानीकालागि खुलेका व्यावसायीक कम्पनीहरुलाई म्युचुअल फण्ड भनिन्छ ।
म्युचुअल फण्डले सर्वसाधरणबाट रकम संकलन गर्छन् र संकलित रकमलाई नाफामूलक तथा भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीमा लगानी गर्छन् । म्युचुअल फण्डकोे विशेष गरि सेयर बजार सम्बन्धि प्राप्त ज्ञान नभएका, पैसा भएर पनि लगानीकालागि पर्याप्त समय नभएका लगानीकर्ताको लागि पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा धेरै म्युचुअल फण्डहरु खुल्ने क्रमजारी रहेको छ । म्युचुअल फण्ड नियमवाली २०६७ आएपछि नेपालमा म्युचुअल फण्ड खुल्ने क्रम बढ्दो रहेको हो । एनसीएमम्युचुअल फण्ड नेपालको पहिलो म्युचुअल फण्ड हो ।
म्युचुअल फण्डमा किन लगानी गर्ने?
म्युचुअल फण्डले प्रत्येक चार चार महिनाको अन्तरालमा आफ्नो वित्तिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । उक्तवित्तीय प्रतिवेदनमा अघिल्लो महिनाको र चालु महिनाको आधारमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको जसको विस्तृत विवरण धितोपत्र बोर्डलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा म्युचुअल फण्डहरुले कुनै पनि सुचनाहरुलाई लुकाउन मिल्दैन अन्य कम्पनी भन्दा म्युचुअल फण्ड पारदर्शी हुन्छ । म्युचअल फण्ड स्थापना हुँदा नै कम्पनीको उद्देश्य, लगानी रणनीति, सेयर खरिद गर्ने तरीका, बिक्रिगर्ने तरिका जस्ता विषय वस्तुलाई प्रष्टसँग समावेश गरिएको हुन्छ ।
तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफलः
यदि हामीसँग भएको बचत पैसालाई बैंकमा डिपोजिट गर्छौ भनेत्यसबाट हामीले निश्चित प्रतिफलमात्र प्राप्त गर्छौ । यदिवित्तिय संस्थामा प्रर्याप्तमात्रमा नगद जम्मा हुन गएमा बचत तथा मुद्दत्ती ब्याजदर घटाउँछन्, एउटा निश्चित ब्याजदर हुँदैन । निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट बैंकले लगानी गरेर जति सुकै धेरै नाफा कमाएपनि निक्षेपकर्तालाई दिने प्रतिफल भनेको निश्चित प्रतिफल ब्याज नै हो । म्युचुअल फण्डको प्रतिफल बैंकको बचत भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी प्रतिफल पाउने सम्भावना हुन्छ । बजारमा राम्रो प्रतिफल दिएका म्युचुअल फण्डहरमा सिदार्थ ग्रोथ स्किम,Nabil equity blancefound लगानी गर्ने Almost double प्रतिफल प्राप्त गर्न सफलभए । त्यसैले, राम्रो म्युचुअल फण्डमा प्रतिफल बढी पाइन्छ ।
लगानीको मुख्य सिद्दान्त भनेको आफुसँग भएको कुल बचत कहिले पनि एउटै क्षेत्रमामात्र लगानी गर्नु हुँदैन । आफुसँग भएको बचतलाई Risk bearing क्षमता अनुसार विभाजन गरी लगानी गर्नुपर्दछ । जस्तो एउटा नेपाली भनाई छ ‘आफुसँग भएको सबै अण्डालाई कहिलेपनि एउटा बास्केटमा नराख्नु’ किनभन्दा उक्त बास्केट ढल्यो भने सबै अण्डा फुट्न गई नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ , यदिती अण्डालाई विभिन्न बास्केटमा राखिएको खण्डमा एउटा ढलेपनि अर्काे बास्केटको अण्डाबाट प्रतिफल पाउन सकिन्छ । त्यसैले लगानी गर्दा पनि एउटा कम्पनीमामात्र नभई विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गरी Risk transfer गर्नुपर्दछ । एउटा कम्पनीमा नोक्सानी हुँदा अर्काे कम्पनीमा नाफा हुन सक्छ । यीम्युचुअल फण्डहरुले लगानी गर्दा सबै क्षेत्रका कम्पनीहरुमा लगानी गर्छन् । हचुवाको भरमा कँहिले पनिलगानी गर्दैनन् । लगानी रणनीतिलाई अवलम्बन गर्दै लगानीलाई विभाजित गर्छन् ।
कुनैपनि लगानीकर्तासँग पर्याप्तमात्रमा पैसा हुन सक्छ तर उसँग ज्ञानको कमिहुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई Professional आवस्यकता रहन सक्छ । लगानीकर्तासँग भएको पैसालाई सहि तरिकाले व्यवस्थापनगरि उच्चप्रतिफल दिन चुनौती हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले विभिन्न Expert hire गरि लगानीको व्यवस्थापन गर्ने गर्दै आएका हुन्छन् ।प्रत्येक दिनजसो professional person deeply analysi गर्छन्, कुनै पनि कम्पनीको बारेमा सुचना संकलनगर्ने यी सुचनाका आधारमा रणनीति खडा गर्दछन् । त्यसैले म्युचुअल फण्डमा व्यावसयिक व्यावस्थापन स्ट्रकङ हुन्छ ।